को बन्नला त नेपाल आईडल ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEventको बन्नला त नेपाल आईडल ?
December 18, 2018 Tulasa Karki Event, Kollywood, News 0
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नेपाली गायन रियालिटी शो नेपाल आईडल दोश्रो सिजन अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । शुक्रबार राजधानी स्थित यसको फाईनल हुनेछ । देशका विभिन्न कुना-काप्चामा लुकेर बसेका प्रतिभालाई निखार्दै टप ४ सम्म आइपुग्दा धेरै प्रतिस्प्रधीहरु पछाडि रहए ।
करीब १०० भन्दा बढी अडिसनबाट छानिएका प्रतियोगीहरुलाई पछि पार्दै झापाका सुमित पाठक र अश्मिता अधिकारी , पोखराकाका बिक्रम बराल र धनगडीका रबि ओड फिनाले सम्म आइपुगेका छन ।
यि चार मध्य अब १ ले मात्र नेपाल आईडलको टाइटल आफ्नो नाममा पार्ने छन । जसको छनोट ५० प्रतिशत भोटबाट जसलाई आम नेपालीहरुले गर्ने छनोट भन्दा पनि फरक नपर्ला किनकी ५० प्रतिशत बब्लिक चोइज हुनेछ भने ५० प्रतिशत निर्णायकको हातमा रहनेछ ।
बब्लिक र निर्णायक दुबैको रोजाइमा शुक्रबार नेपाल आईडलको घोषणा हुनेछ । अब को बन्नला त नेपाल आईडल त्यसका लागि भने शुक्रबार राती सम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
अनन्त नेपाल आईडल टप ४ मा पुगेका सम्पूर्ण प्रतिस्प्रधीलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै-धेरै शुभकामना ।